Mai Chibwe VekwaZimuto: Varume imbotijekeseraiwo
Varume imbotitauriraiwo kuti nyaya dzenyu dzinofamba sei?
Kana wawana nguva imbotidavirirawo mivunzi iyi
1 Paya paunopa mukadzi wako urume unohwa sei pakuitika kwazvo?
2.Kunakigwa nomukadzi kunofamba sei, anenga aitei? ndechipi chiitiko chinokunakira chose?
3 Zvakasiyanei kupfeka nokusapfeka Kondhomu?
4 Ko nyaya yokufunga kuti kukura kwechombo ndiko kunonakira vakadzi makaiwanepi?
5 Seiko mahure munyika dzese zvadzo vachifambigwa nevarume vane vakadzi mudzimba kwete nemajaya? Kusiya mukadzi mumba wemahara uchindotsvaka hure rekuhadhara zvinoitiswa nei?
Tichazomunza imwe mivunzo asi dai mambotiatsirawo pamafungire enyu pamivunzo iyi tihwisisane.
Tikawana varume vanopfuuura 20 vangadawo kutiudza mafungire avo tenge tagona. Kana usingadi kutaurira pano nyorera kukero inoti Maichibwe@yahoo.co.uk
Posted by Mai E Chibwe at 12:43
pakuburitsa hurume ndipo panonyanyonaka. 2 kunakirwa nemukadzi kunosiyanasiyana ini ndinonakigwa kana akachemerera zvinobva zvandiudza kuti anakigwawo zvekare. Panyaya yekusiya mukadzi mumba vakadzi maita dambudziko rekuti kana maroorwa yu relax zvekuti even kugeza chaiko kunototanga kunetsa saka better kuenda kuhure rakanaka uye rakageza
Ini ndoda Question 3 Chete. Zviri nani kusv**a wife yangu ndisina condom. Much much better. Ndiyo experience yangu iyoyo. Thank you.
1 Unonzwa kuzipirwa nekudurura.Kana makambopreswa neweti. Zviya zvaunganzwa paunoitira weti. the joy and relief you get. kkkk
2.Kunaka kwemukadzi kunobva pakuva mukati mazvo kwake. Chikapa chaanokupa. Kusunga nekusunungra kwaanoita. kozoti kungogadzikana kwaunenge wakaita uchiita. Asiwo pamwe kana zviri zvekubira, kuita uchitya kubatwa kunoitawo kuti zviwedzere kunaka.
3 Ini ndinosiita ndisina kupfeka condom. Ndava pakati mai vatunda, uye iniwo ndave pedo ndochipfeka condom. Ndakaona kuti pandinopfeka condom handichanyanyonzwa kuzipirwa sekwandange ndiinako. Condom rinoda kungoshandiswa kubva kwekutanga kusvika kwekupedza.
4 Iyi inyaya dzinotaurwa muchikura kuti vakadzi ndizvo zvavanoda. Zvinobva zvaita kuti mufungwa medu mutongogara muchiti dai ikakura. Asiwo mukufamba umu, ndakaona kuti vakadzi vanozipirwa nehombe. kana kuti ndainyeperwa hangu nekuti yangu yakati rebei
5 Mahure haadi commitment zvinova zvimwezvo nevarume vevanhu. Izvi ndizvo zvinoita kuti vaviri ava vawirirane. Chinoita kuti murume andobhadhara hure pamwe ingava yekuti ari munzara yekunyimwa kumba. Izvi I say from experience. Pandainyimwa ndainobhadhara kuti ndimbobvisa nhomba yacho.
Mobvunza, topindura hino morega kuisa pano. Munoti tichabatikanazve here in future? Chimboitai henyu Mai Chibge.
Murume akaroora anoita gore asina kuhura nokuti mukadzi haasi kumunyima. Mukadzi akaita midzi pamba ofunga kuti murume haachina basa. Muruma kuhura kushaya Mai Chibwe. Vakadzi vanonyima. Unomboshinga asi In the end unohura.
shepherd kasosera said...
Kunakirwa uku kunosiyana siyana zvichienderana nezvirimupfungwa memurume. Dzimwe nguva zvinoita se zvirikunaka kupfuura nguva dzese asi mangwana zvotoita se svapfuura futi kupinda nezuro.
Pakuvatana nguva urume husati hwabuda kunaka kwacho kunoita kuchichinja chinja. Chombo chinenge chichiita sekunyerekedzwa asi zvakati simbei Zvoti dzikei neche pakati pemakumbo kumudzi we chombo. uye chombo chacho nguva yachinenge chirimukati chinoti wedzerei kuoma zvinotonzwika. apa pfungwa dzikasakanganiswa dzinenge dzaakuteerera zvirikuitika kuchombo.
simba rinotiwedzerei kana kubatirira kunoita sezvinonzwi mukadzi wacho ati aakutiza.
Panotanga kubuda urume muviri wese unooma zvekuti murume anogona katadza kuu controla. simba rinoti wedzerei futi, koita kuita sekupererwa ne mweya wekufema ipapo chombo chinobva chanyatsooma kumira. urume hunotonzwika huchiita sehuri kabva mukati nechekumidzi yechombo. Hurume hunoita se hurikumanikidzira pahusirikunyatso kwana sokunge tsinga yahurikufamba nawho yaita diki apa huchiita sekakutekenyedza kakati pfuurirei . Ipapo muviri vese kunyanya pakatenderedza chombo panoita sezvinoita muwiri kana uchizamuri uchangobva kumuka mangwanani kana wanga wakagara kwenguva refu, asi zvakati simbeyi zvichizunguza muviri wese.
Zvichingopera panoita kakurukutika ipapo ipapo nekunzwa kuda kurara, Chombo chonogona kutanga kuti rerukei.
2. Kunagirwa nemukadzi kurimupfungwa. Kuti chii chamboitika vaviri vasati varara vese. pakaita kutamba nekuwedzerana zemo zvakakwana. zvinoita kuti pfungwa dzigadzirire bonde uye kutarisirakuvatana kwakanyanya. Maitiro anoitawo mukadzi mukukwezva murume anoitawo kuti murume anyatsowedzera zemo nekuda kuvatana. kozoita mamiriro akaita muchitubu panguva iyoyo inenge vaviri vachikoirana. mukawandisa kunyorova apa chitubu chakati kurei zvinoderedza friction zvesenekunaka , muchitubu mukaoma ichochitubu chakashinya chombo zvinogona kutanga kurwadza zvoderedza kunakirwa. Asiwo chitubu chidiki chakashinya chombo chotota zvakakwana zvinowedzerawo kunaka uyewo chitubu chakati kurei chikaita hunyoro hushoma zvinowedzera friction zvowedzera kunakawo
3. ndakamboputikirwa ne condom. zvakati siyanei. kakunaka kacho kakati siyanei. Condom harinzonakawo sekurara pasina condom. apa pfungwa dzinenge dzichingotya kuputikira zvichikonzerwawo nekutya nhumbu isina kurongwa kana zvirwere zvebonde. Asi ndapota kana condom richifanirwa kupfekwa ngaripfekwe.
4. Pfungwangwa dzekukura kwechombo dzinobva kwakawanda. (1) kuona porn, Ma actors acho anotsvagwa ano zvombo zvihombe. saka umwewo akatarisa zvaarikuona ozvitarisa zvinoita sekunge haana kunyatsosvika panomufadza.(2) Mukadzi akabereka akasdzora chitubu. KUpinda nkwacho kunoita sekunge chombo chaita chidiki. (3) Nyaya dzevarume pavanosangana dzinoita sekushora tunhengo tudiki vo pembedza zvombo zvihombe. Uyewo mukatarisa social media, unonzwa vakadzi vachiti "ndirikutsvagawo murume akadai akadai ozoti ane hombe" zvoita sekuti chombo chihombe ndochinotaura kuti murume chaiye.
5. Yevarume vanoenda kumahure handina ruzivo nayowo iyo. Handisati ndambo enda kumahure.
Panonakidza zvikuru. Unonzwa sensation pachombo inokuzivisa kuti zvakuda kuitika. Paunotanga kudiridzira muviri wese unogwinha haugone kuzvimisa nyangwe ukada sei kukoira zvine rhythm sezvawanga uchiita usati wadiridzira zvinoramba. Kudiridzira kwakakoshera varume zvekuti nyangwe akaita rhoji kwe 1 hour chaiyo akasabudisa urume anonzwa kunge asina zvaaita.
Tinogodawo mukadzi anoratidza kufararira rhoji. Zvinodiwa nevarume zvinosiyana asi ndirini ndinoda mukadzi asinganyare pabonde. Taura mashoko anodenha, taura pafeya and dzidziraiwo kutanga rhoji "nhasi ndirikuda mb*ro yangu", "ndisv*re", taurai ma styles amunoda kuitwawo. Zvava zvekare zvekutya kunzi unozonzi wakazviwanepi iwo ma magazine evakadzi achitaura nezvazvo, maradio show nema kitchen party zvichitaurwa. Iva innovative and creative. Bvunza murume wako kuti anofarirei, zviite, usaseme kudya chombo. Ziva kudenha havi yemurume mumba, kungoita sewatadza kugara apa uchimuratidza chitubu makagara pama sofa, kutamba nechombo. Chemererawo pabonde, iva munhu anozungunuka pabonde. Endawo pamusoro.
Zvakatosiyana serima nechiyedza. Ndakambodambukirwa nekondomu ndirijaya ndikatonzwa kuwedzera kudziya uye nekunyatsonzwa kuwedzera kukwizwa chombo nechitubu. Rhoji usina uKupfeka kondomu inonaka zviripamberi. Nyangwe wandaiita rhoji naye akatonditiwo akanzwa kuzipigwa kwakawedzerwa zvava feya feya.
Zvinenge zvinobva pakunzwa vanhu vachingotaura. Ndakanzwa nyangwe vakadzi vamwe chaivo vachiti vanoda dzakareba kana kuti hobvu "dzinemazitsinga" dzinovhara mweya dzichinyatsokwiza mukati mese mechitubu. Asiwo ndoiva hangu kuti kunakira munhu kuripamaitirwo erhoji. Pornography ndoimwe yakonzeresa dambudziko irori. Vanobuda mumafirimu iwawo vanosarudzwa nenyaya yekukura kwezvombo vakadzi vachisarudzirwa kukura kwemazamu neshure. Saka ukazoona mafirimu aya varume vanozoona kunge vane diki vachizvifananidza nevarimufirimu. Zvakafanana kusafara nekupfupika waona vatambi ve basketball vanosarudzwa kupinda muteam nenyaya yekureba. vanhu vashomanini vanenge vaine nhengo dzakakura sedzemuma porno.
Varume vakawanda vaimboita zve rhoji vasati varoora vanotoseka kuti vaitoita rhoji kakawanda kupfuura pavakazoroora. Dzimwe nguva madzimai anongodzikira pakuda kwavo bonde. Vamwe varume havazozvikwanise zvekusawana bonde. Kuita girlfriend kunopa basa: uchapfimba munhu, wozonyengerera nekutenga chikafu enzvaanenge achida wozowana rhoji, pedzezvo girlfriend ichazoda zvekudanana yonetsa nekufona pamwe pasingaite. Kupfambi ananege atori pabasa racho, chake kupihwa mari yaachaja and haanei newe kana mapedza. Hapana zvakuzofonerwa. Zvakachipa kudarika mari inopedzwa pane girlfriend. Uyezve pfambi dzinoziva kubata varume zvakanaka, ndokubasa kwavo!! Handisikuti zvakanaka asi zvimwe zvinotangira pakunyimwa kumba kozoitawo vamwewo varume vanongoda kuita chihure.
30 May 2017 at 14:04
Tinotenda. Asina kuhwisisa hake haana. Asi kungodawo kuwedzera kuti kune vakadzi vakawanda mudziba vanomirira kuhi nomurume bvisa bhurugwa uuye pano. Zvino kana murume akangoti zii iyewo zii, ofunga kuti murume nhasi haadi.
Koitazve vamwe vanoswera kumabasa ouya kumba umiramira mumba kubika, kusuka, kusona, kugezesa vana, kuisira murume mvura. Pakuzonovata haachisina simba. Murume ane mukadzi anoshanda ngaabatsirewo mukadzi kuti kuBEDROOM kuwedzere basa.
Koita murume anoroora mukadzi wechidiki anomunyara kumududzira kuti anoda kuiswa. Saka iye murume ngaachiwanza kushusha mukadzi pazviri. Mukadzi wechidiki haarambi kuvata nomurume wake.